Tag: Ngwa oru ahia »Page 2 nke 2» Martech Zone
Tag: ngwa ahia
Amụma ahịa nke 2016
Monday, December 7, 2015 Saturday, December 26, 2015 Bọọlụ Lorraine
Ịgụ Oge: 3 nkeji Otu ugboro n'afọ m na-agbaji bọọlụ ochie kristal ma kesaa amụma ahịa ole na ole na ọnọdụ m chere ga-adị mkpa maka obere azụmaahịa. N'afọ gara aga, eburu m amụma ịrị elu na mgbasa ozi mmekọrịta, ọrụ gbasaawanye nke ọdịnaya dị ka ngwá ọrụ SEO yana eziokwu ahụ bụ na ịzigharị ozi mkpanaka agakwaghị abụ nhọrọ. Nwere ike ịgụ amụma ahịa 2015 m niile ma hụ etu m siri nọrọ. Mgbe ahụ gụkwuo
Ịgụ Oge: 2 nkeji Nke a bụ nnukwu infographic site na ndị mgbaghara na otu nzukọ ebe ahịa na ire ahịa na-agbasi ike iji kwado onwe ha. Dịka onye na-azụ ahịa maka ahịa, anyị na ndị otu na-agba ahịa na-agba mgba. Otu isi okwu bụ na ụlọ ọrụ ndị ahịa na-ere ahịa na-etinyekarị otu atụmanya ha nwere maka ndị ahịa ha na otu ndị ahịa. Anyị na-goro site ahịa-chụpụrụ òtù n'ihi na ha na-aghọta na ha ika emebeghị wulite mmata, ikike na ntụkwasị obi online na na ha ahịa
← Nke gara aga 1 2
Page 2 nke 2